Bosnia na Herzegovina kọnvatịbụl akara Botswana pula
Brazil n'ezie Brunei dollar
Cayman Islands dollar Chile Unidad de Fomento
Chile peso Colombian peso
Comoran franc Congo na franc
Czech koruna Danish okpueze
Deutsche akara Djibouti franc
East Caribbean dollar Estonian Kroon
Etiopia birr Euro
France eziokwu French Pacific franc
Greek mkpụrụ ego drakma Guarani
Ijipt pound Indian rupee
Israel ọhụrụ shekel Italian lire
Jordan dinar Kambodia riel
Mexico peso Moldova leu
Mozambique metical Nakfa
Nigerian naira Nku azu akara
North Korean merie Norwegian krone
Omani rial Onye Belgium franc
Portuguese escudo Pound magburu onwe
Rwandan franc SDR (Special na-eru ikike)
Siria pound Slovak koruna
Somali shilling South Korean merie
São Tomé na Príncipe dobra Taiwan ọhụrụ dollar
Tanzania shilling Thai baht
Trinidad na Tobago dollar Tunisian dinar
Turkmenistan Manat Turkmenistan ọhụrụ Manat
Uzbekistan nchikota Vanuatu vatu
Yuan Yugoslavian ọhụrụ dinar
Zambia kwacha Zimbabwe dollar
Akụkọ banyere ruturu na ọnụego mgbanwe na 2020.
Akuko zuru oke nke onu ahia ego nke ubochi n’onwa obula. Akuko zuru oke nke onu ahia ego nke ubochi n’onwa obula. Ọnụego mgbanwe na nhota maka 2020 maka ụbọchị ọ bụla.
Ntinye ego na ntughari ego nke ego mba uwa maka 2019.
Ọnụego mgbanwe na nhota maka 2019 maka ụbọchị ọ bụla. Ọnụego mgbanwe na nhota maka 2019 maka ụbọchị ọ bụla. N'ebe a, ị nwere ike ịchọpụta ọnụego ego ọ bụla maka ụbọchị ọ bụla.
Akụkọ banyere ruturu na ọnụego mgbanwe na 2018.
Ọnụego mgbanwe maka Nigerian naira ọnụego mgbanwe maka ụbọchị ụbọchị maka 2018. Ọnụego mgbanwe maka Nigerian naira ọnụego mgbanwe maka ụbọchị ụbọchị maka 2018. Akụkọ banyere mgbanwe nke mkpụrụ ego ụwa ọ bụla maka 2018 maka ụbọchị niile.
Akụkọ banyere ọnụego mgbanwe na ihe ndị e kwuru maka 2017.
Akụkọ ihe mere eme nke ụwa Nigerian naira ọnụego mgbanwe maka 2017 kwa ụbọchị. Akụkọ ihe mere eme nke ụwa Nigerian naira ọnụego mgbanwe maka 2017 kwa ụbọchị. Ọnụego mgbanwe kwa ụbọchị (see okwu) nke ego ụwa maka 2017.
Ọnụego mgbanwe na rịrị okwu maka 2016.
Ọnụego mgbanwe kwa ụbọchị (see okwu) nke ego ụwa maka 2016. Ọnụego mgbanwe kwa ụbọchị (see okwu) nke ego ụwa maka 2016. Akụkọ ihe mere eme nke ụwa Nigerian naira ọnụego mgbanwe maka 2016 kwa ụbọchị.
Akụkọ banyere ọnụego mgbanwe na ihe ndị e kwuru maka 2015.
Akụkọ banyere ọnụego ego ụwa kwa ụbọchị. Akụkọ banyere ọnụego ego ụwa kwa ụbọchị. Ọnụego mgbanwe maka ụbọchị kwesịrị ekwesị maka 2015.
Ọnụego mgbanwe ego, ọnụahịa ego ụwa maka 2014.
Kwa ụbọchị Nigerian naira ọnụego mgbanwe (see okwu) maka 2014. Kwa ụbọchị Nigerian naira ọnụego mgbanwe (see okwu) maka 2014. Akụkọ banyere mgbanwe ọnụego ego niile ka enyere mmadụ niile aka.
Ọnụego mgbanwe na rịrị okwu maka 2013.
Akụkọ banyere mgbanwe nke mkpụrụ ego ụwa ọ bụla maka 2013 maka ụbọchị niile. Akụkọ banyere mgbanwe nke mkpụrụ ego ụwa ọ bụla maka 2013 maka ụbọchị niile. Akụkọ banyere Nigerian naira ruturu maka ụbọchị ọ bụla nke 2013.
Ọnụego mgbanwe ego, ọnụahịa ego ụwa maka 2012.
Akuko zuru oke nke onu ahia ego nke ubochi n’onwa obula. Akuko zuru oke nke onu ahia ego nke ubochi n’onwa obula. Akụkọ banyere Nigerian naira ruturu maka ụbọchị ọ bụla nke 2012.
Akụkọ banyere ọnụego mgbanwe na ihe ndị e kwuru maka 2011.
Akuko zuru oke nke onu ahia ego nke ubochi n’onwa obula. Akuko zuru oke nke onu ahia ego nke ubochi n’onwa obula. Nigerian naira ọnụego mgbanwe na ruturu maka 2011 maka ụbọchị ọ bụla.
Ọnụego mgbanwe na ọnụ ahịa ego nke ụwa maka 2010.
Akụkọ ihe mgbe ochie na-ekwu maka ụbọchị ọ bụla nke 2010. Akụkọ ihe mgbe ochie na-ekwu maka ụbọchị ọ bụla nke 2010. N'ebe a, ị nwere ike ịchọpụta ọnụego ego ọ bụla maka ụbọchị ọ bụla.
Akụkọ banyere ọnụego mgbanwe na ihe ndị e kwuru maka 2009.
Anyị na-edekọ akụkọ gbasara ebe niile ihe ndị dị ka maịlị kwa ụbọchị. Anyị na-edekọ akụkọ gbasara ebe niile ihe ndị dị ka maịlị kwa ụbọchị. Ọnụego mgbanwe maka ụbọchị kwesịrị ekwesị maka 2009.
Ọnụego mgbanwe na rịrị okwu maka 2008.
Anyị na-edekọ akụkọ gbasara ebe niile ihe ndị dị ka maịlị kwa ụbọchị. Anyị na-edekọ akụkọ gbasara ebe niile ihe ndị dị ka maịlị kwa ụbọchị. Ọnụego mgbanwe kwa ụbọchị (see okwu) nke ego ụwa maka 2008.
Kwa ụbọchị Nigerian naira ọnụego mgbanwe (see okwu) maka 2007. Kwa ụbọchị Nigerian naira ọnụego mgbanwe (see okwu) maka 2007. Ebe nchekwa data nke akụkọ ihe mere eme ọnụego mgbanwe.
Akụkọ banyere Nigerian naira ruturu maka ụbọchị ọ bụla nke 2006. Akụkọ banyere Nigerian naira ruturu maka ụbọchị ọ bụla nke 2006. Akuko zuru oke nke onu ahia ego nke ubochi n’onwa obula.
Ọnụego mgbanwe ego, ọnụahịa ego ụwa maka 2005.
Akụkọ ihe mere eme nke ụwa Nigerian naira ọnụego mgbanwe maka 2005 kwa ụbọchị. Akụkọ ihe mere eme nke ụwa Nigerian naira ọnụego mgbanwe maka 2005 kwa ụbọchị. N'ebe a, ị nwere ike ịchọpụta ọnụego ego ọ bụla maka ụbọchị ọ bụla.
Akụkọ banyere ọnụego mgbanwe na ihe ndị e kwuru maka 2004.
N'ebe a, ị nwere ike ịchọpụta ọnụego ego ọ bụla maka ụbọchị ọ bụla. N'ebe a, ị nwere ike ịchọpụta ọnụego ego ọ bụla maka ụbọchị ọ bụla. Kwa ụbọchị Nigerian naira ọnụego mgbanwe (see okwu) maka 2004.
Ọnụego mgbanwe na ọnụ ahịa ego nke ụwa maka 2003.
Ọnụego mgbanwe ma ọ bụ ruturu nke Nigerian naira maka 2003 maka ọnwa na maka ụbọchị niile. Ọnụego mgbanwe ma ọ bụ ruturu nke Nigerian naira maka 2003 maka ọnwa na maka ụbọchị niile. Akụkọ banyere mgbanwe nke mkpụrụ ego ụwa ọ bụla maka 2003 maka ụbọchị niile.
Ntinye ego na ntughari ego nke ego mba uwa maka 2002.
Ọnụego mgbanwe ma ọ bụ kwuo banyere ihe ndị na-akwụ ụgwọ ụwa maka 2002 maka ọnwa ọ bụla na kwa ụbọchị. Ọnụego mgbanwe ma ọ bụ kwuo banyere ihe ndị na-akwụ ụgwọ ụwa maka 2002 maka ọnwa ọ bụla na kwa ụbọchị. Akuko zuru oke nke onu ahia ego nke ubochi n’onwa obula.
Akụkọ banyere ọnụego mgbanwe na ihe ndị e kwuru maka 2001.
Ọnụego mgbanwe maka ụbọchị kwesịrị ekwesị maka 2001. Ọnụego mgbanwe maka ụbọchị kwesịrị ekwesị maka 2001. Akụkọ banyere Nigerian naira ruturu maka ụbọchị ọ bụla nke 2001.
Ọnụego mgbanwe na rịrị okwu maka 2000.
Kwa ụbọchị Nigerian naira ọnụego mgbanwe (see okwu) maka 2000. Kwa ụbọchị Nigerian naira ọnụego mgbanwe (see okwu) maka 2000. Anyị na-edekọ akụkọ gbasara ebe niile ihe ndị dị ka maịlị kwa ụbọchị.
Ọnụego mgbanwe ego, ọnụahịa ego ụwa maka 1999.
N'ebe a, ị nwere ike ịchọpụta ọnụego ego ọ bụla maka ụbọchị ọ bụla. N'ebe a, ị nwere ike ịchọpụta ọnụego ego ọ bụla maka ụbọchị ọ bụla. Ọnụego mgbanwe ma ọ bụ kwuo banyere ihe ndị na-akwụ ụgwọ ụwa maka 1999 maka ọnwa ọ bụla na kwa ụbọchị.
Ọnụego mgbanwe na ọnụ ahịa ego nke ụwa maka 1998.
Anyị na-edekọ akụkọ gbasara ebe niile ihe ndị dị ka maịlị kwa ụbọchị. Anyị na-edekọ akụkọ gbasara ebe niile ihe ndị dị ka maịlị kwa ụbọchị. Akụkọ banyere Nigerian naira ruturu maka ụbọchị ọ bụla nke 1998.
Akụkọ banyere ruturu na ọnụego mgbanwe na 1997.
Akụkọ banyere mgbanwe nke mkpụrụ ego ụwa ọ bụla maka 1997 maka ụbọchị niile. Akụkọ banyere mgbanwe nke mkpụrụ ego ụwa ọ bụla maka 1997 maka ụbọchị niile. Akụkọ banyere Nigerian naira ruturu maka ụbọchị ọ bụla nke 1997.
Akụkọ banyere mgbanwe nke mkpụrụ ego ụwa ọ bụla maka 1996 maka ụbọchị niile. Akụkọ banyere mgbanwe nke mkpụrụ ego ụwa ọ bụla maka 1996 maka ụbọchị niile. Anyị na-edekọ akụkọ gbasara ebe niile ihe ndị dị ka maịlị kwa ụbọchị.
Ọnụego mgbanwe maka ụbọchị kwesịrị ekwesị maka 1995. Ọnụego mgbanwe maka ụbọchị kwesịrị ekwesị maka 1995. Nigerian naira ọnụego mgbanwe na ruturu maka 1995 maka ụbọchị ọ bụla.
Ọnụego mgbanwe na rịrị okwu maka 1994.
Ọnụego mgbanwe na nhota maka 1994 maka ụbọchị ọ bụla. Ọnụego mgbanwe na nhota maka 1994 maka ụbọchị ọ bụla. Anyị na-edekọ akụkọ gbasara ebe niile ihe ndị dị ka maịlị kwa ụbọchị.
Ọnụego mgbanwe ego, ọnụahịa ego ụwa maka 1993.
Akụkọ ihe mgbe ochie na-ekwu maka ụbọchị ọ bụla nke 1993. Akụkọ ihe mgbe ochie na-ekwu maka ụbọchị ọ bụla nke 1993. Ọnụego mgbanwe ma ọ bụ ruturu nke Nigerian naira maka 1993 maka ọnwa na maka ụbọchị niile.